I-Linux Mint ilibazisa imibala ye-Mint-Y kwaye ipapasha isikhokelo somsebenzisi | Ubunlog
Izolo ibilusuku olubalulekileyo kubasebenzisi be-Ubuntu ye-mint flavour engekho semthethweni kuba uClement Lefebvre neqela lakhe baphosa Linux i-20Kodwa bebesele besenza umsebenzi wokulungiselela iveki yonke. Phakathi kweeyure ezingama-24 ukuya kwezingama-48 ngaphambi kokumiliselwa sele belayishe imifanekiso ye-ISO emitsha, kodwa, njengoko kuchaziwe kubo Incwadana yeendaba yenyanga kaJuni, kwiintsuku phambi kokuba sele belungiselela isikhokelo somsebenzisi apho bachaza khona izinto ezahlukeneyo.
Nangona nje ikhonkco la Isikhokelo somsebenzisi Bacacisa ukuba «Esi sikhokelo ayisosiphelo»Kwaye oko« EUmxholo uyongezwa kancinci kodwa ngokuqinisekileyo«, Sele bejongana nezihloko ezithathu: Ivenkile yeSnap, iChromium kunye nemenyu yeGrub. Ekuqaleni, eyona nto ibaluleke kakhulu yile bayichazayo kwivenkile ye-Snap kunye neChromium, ezichaza kuyo Ekuqaleni Kutheni le nto besenzile esi sigqibo kwaye bangasiguqula njani, kwaye in el segundo ukuba iChromium ifumaneka kuphela ngokusemthethweni njenge-Snap, kodwa inokufakwa kwii-repostories zomntu wesithathu.
I-Linux Mint Mint-Y Umxholo uya kunika imibala eKhanyayo e-Ulyana
I-Linux Mint iwuguqule umba weGrub
Olunye ulwazi abasinike lona kule nyanga bakwasixelela ngamanyathelo amabini abuyela umva, okanye iiprojekthi ezimbini ezilibazisekileyo ukuba zichaneke ngakumbi. Eyokuqala intsha Ipeyinti yombala weMint-Y, apho unolwazi oluthe kratya kwinqaku elinxulumene noko, eliza kudibana neLinux Mint 20.1. Babuyele kutshintsho olwenze ukuba imenyu yeGrub ihlale ibonakala kunye nomxholo weGrub, ususwe kuba kolu khuseleko kuthintele u-Ulyana ekumiliseleni kwezinye iilaptops.
Iprojekthi ekhokelwa nguLefebvre ihlala ikhupha ingxelo entsha yenkqubo yayo yokusebenza rhoqo kwiinyanga ezi-5-6, ke iLinux Mint 20.1, eya kuthi iqhubeke isekwe kwi-Ubuntu 20.04, ifike ngasekupheleni kuka-2020.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Linux mint » Ukulibaziseka kweLinux Mint Mint-Y umbala wephalethi kwaye upapashe isikhokelo somsebenzisi esitsha esichaza izinto ezimbalwa
Ewe, njengoko le nguqulelo iyibhotile esele ikhutshiwe, kuya kufuneka silinde i-20.1, kulapho baya kuthi benze izinto ngokuchanekileyo. Lowo uhamba nesiqhwala, ugqibela ngokuqhwalela, ezi zintsozi zifumana ububhanxa benkcazo.
Ndiyavuma. Kuya kufuneka bakhuphe ingxelo entsha xa sele ilungile kwaye bangangxami ukuhlangabezana nexesha elibekiweyo. Njengoko benditshilo ngaphambili, iindaba zimbalwa kwaye azichani ncam. Ukongeza kukho izandiso ezingasebenziyo kule nguqulo yeCinnamon.
Kuko konke okuthethiweyo, ndiza kuqhubeka kwiLinux Mint 19.3 Cinnamon elinde uguqulelo olulandelayo ukulungisa ezinye iingxaki ezinje ngokusetyenziswa kakhulu kwememori yenkunzi yegusha, iqala nge-1gb, eninzi kakhulu.
Ndihlaziyiwe kwaye khange ndibenangxaki ...
Kuya kufuneka bazikhuphele iinguqulelo xa sele belungile kwaye bekhazimlisiwe, ethi ke, ngenxa yexesha elithintelayo ukuhlangabezana nexesha elimiselweyo, kwenzeka ntoni. Ndizamile iMint 20 kunye ne-20.1 beta, kwaye kuye kwafuneka ndibuyele kwinguqulelo 19.3, ke ndivumelana ngokupheleleyo nezimvo zabalingane apha: musa ukuzibekela ixesha elimiselweyo. Clem, kancinci kunye namazwi amnandi nceda.